Manampahefana momba ny fizahantany any Hawaii miatrika fihenan'ny tetibola
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Manampahefana momba ny fizahantany any Hawaii miatrika fihenan'ny tetibola
Enga anie 28, 2009
Ny manampahefana fizahan-tany any Hawaii dia mijery ny fihenan'ny 5 isan-jato amin'ny teti-bolan'izy ireo amin'ny varotra, satria mifandraika amin'ny fizahan-tany mahaliana an'i Hawaii.
Ny manampahefana fizahan-tany any Hawaii dia mijery ny fihenan'ny 5 isan-jato amin'ny teti-bolan'izy ireo amin'ny varotra, satria mifandraika amin'ny fizahan-tany mahaliana an'i Hawaii. Izay no aseho amin'ny volavolan-dalàna voalohany amin'ny teti-bolany 71 tapitrisa dolara hatreto.
Marsha Wienert, mpampifandray ny fizahan-tany amin'ny fanjakana dia nilaza hoe: Ao anatin'ny krizy fizahan-tany isika. ” Notohizany fa ny laharam-pahamehana indrindra dia ny fampitomboana ny isan'ny mpitsidika an'i Hawaii sy ny vola laniny eto.
Raha ny filazan'ny filoha lefitry ny marketing an'ny HTA David Uchiyama, ny tetibola miasa dia miatrika ireo olana ireo amin'ny fomba voalanjalanja amin'ny famatsiam-bola. Hoy izy: "Izahay dia mitady hetsika ara-barotra izay mamakivaky ny korontana ary afaka mampiavaka antsika amin'ireo mpifaninana aminay." Nampiany koa fa mijery marketing izay manavao kokoa sy "ivelan'ny boaty" izy ireo.
Weinert koa tsy miombon-kevitra amin'ny drafitra hampiasana kely kokoa amin'ny fialan-tsasatra fialam-boly mifanohitra amin'ny varotra fitsangatsanganana orinasa ho an'ny taona ho avy - 4.5 tapitrisa dolara amerikana. Hoy izy: "Raha ny hampisondrotra ny fahatongavan'ireo mpitsidika no tanjontsika ankapobeny, dia ilaina ny fanaovana hetsika fanampiny amin'ny marketing."
Ny tetibola tetika dia manolotra 69 isan-jaton'ny vola amin'ny marketing ary mila mandeha alohan'ny birao feno hahazoana fankatoavana.
Ny filohan'ny komity amin'ny tetibola, Vernon Char, dia nilaza fa mahatsapa ny fitahirizany tahiry mitentina 3 tapitrisa dolara amerikana dia hanampy amin'ny famahana ny olan'ny Wienert.